47 O wee kpọghachite m n’ọnụ ụzọ Ụlọ ahụ,+ ma, lee! mmiri+ si n’okpuru ọnụ ụzọ Ụlọ ahụ, nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ,+ na-asọpụta, n’ihi na Ụlọ ahụ chere ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ. Mmiri ahụ si n’okpuru ya, n’akụkụ aka nri nke Ụlọ ahụ, n’ebe ndịda nke ebe ịchụàjà, sọrọ na-agbada.
2 O wee si n’ọnụ ụzọ ámá nke dị n’ebe ugwu+ kpọpụta m, sikwa n’ọnụ ụzọ ámá chere ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ+ kpọgharịa m, ma, lee! mmiri+ si n’akụkụ aka nri na-agbapụta.
3 Mgbe nwoke ahụ ji eriri e ji atụ̀ ihe+ gaa n’ebe ọwụwa anyanwụ, ọ tụtara otu puku kubit, durukwa m gafee mmiri ahụ, bụ́ mmiri nke ruru m na nkwonkwo ụkwụ.
4 O wee tụta otu puku kubit, durukwa m gafee mmiri ahụ, bụ́ mmiri nke ruru m n’ikpere.
O wee tụta otu puku kubit ọzọ, durukwa m gafee mmiri ahụ, bụ́ mmiri nke ruru m n’úkwù.
5 O wee tụta otu puku kubit. Ọ bụ iyi m na-enweghị ike isi na ya gafere, n’ihi na mmiri ya etoola, bụ́ mmiri a pụrụ igwu egwu, iyi a na-apụghị isi na ya gafere.
6 O wee sị m: “Ị̀ hụla ihe a, nwa nke mmadụ?”
O wee mee ka m jee ije, meekwa ka m gaghachi n’akụkụ iyi ahụ.
7 Mgbe m gaghachiri, lee! ọtụtụ osisi dị n’akụkụ iyi ahụ, n’otu akụkụ nakwa n’akụkụ nke ọzọ.+
8 O wee sị m: “Mmiri a na-asọga n’ógbè dị n’ebe ọwụwa anyanwụ, ọ ga-esikwa n’Araba+ sọrọ gbadaa. Ọ ga-asọba n’oké osimiri.+ Mgbe ọ sọbara n’oké osimiri ahụ,+ o mere ka mmiri ya dị mma.
9 Ọ ga-erukwa na mkpụrụ obi ọ bụla dị ndụ nke na-enugharị enugharị,+ n’ebe ọ bụla iyi ahụ nke toro okpukpu abụọ sọrutere, ga-adị ndụ. Ọtụtụ azụ̀ ga-adị, n’ihi na ọ bụ n’ebe ahụ ka mmiri ahụ ga-asọrute. A ga-emekwa ka mmiri oké osimiri ahụ dị mma,+ ihe ọ bụla nke dị n’ebe iyi ahụ sọrutere ga-adị ndụ.
10 “Ọ ga-erukwa na ndị na-akụ azụ̀ ga-eguzo n’akụkụ ya malite n’En-gidaị+ ruo En-egleyim. A ga-enwekwa ebe a ga na-agbasa ụgbụ ka ọ kọọ. Azụ̀ ha ga-adị n’ụdị dị iche iche, dị nnọọ ka azụ̀ ndị dị n’Osimiri Ukwu,+ ha ga-adịkwa ọtụtụ nke ukwuu.
11 “E nwere ebe dị iche iche mmiri na-adọ na ya nakwa ebe ndị dị apịtị apịtị. A gaghị eme ka ebe ndị ahụ dị mma.+ Ebe ahụ ga-abụ nnu nnu.+
12 “Ụdị osisi niile na-amị mkpụrụ a na-eri eri ga-eto n’akụkụ iyi ahụ, n’otu akụkụ nakwa n’akụkụ nke ọzọ.+ Akwụkwọ ha agaghị akpọnwụ akpọnwụ,+ a gaghịkwa ericha mkpụrụ ha ericha.+ Ha ga na-amị mkpụrụ ọhụrụ kwa ọnwa, n’ihi na mmiri ha si n’ebe nsọ ahụ na-asọpụta.+ A ga na-eri mkpụrụ ha eri, jirikwa akwụkwọ ha na-agwọ ọrịa.”+
13 Nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru: “Nke a bụ ókèala unu ga-eke n’etiti onwe unu ka ọ bụrụ ihe nketa nke bụ́ ala e nyere ebo iri na abụọ nke Izrel. A ga-enye Josef ibé ala abụọ.+
14 Unu ga-eketakwa ya, onye ọ bụla ga-eketa ihe nwanne ya ketara, ya bụ, ala m weliri aka m ṅụọ iyi+ inye nna nna unu hà.+ Unu ga-enwetakwa ala a dị ka ihe nketa site n’ife nza.+
15 “Nke a bụkwa ókè ala ahụ n’ebe ugwu, malite n’Osimiri Ukwu, n’ụzọ e si aga Hetlọn,+ n’ebe e si aga Zidad,+
16 Hemat,+ Berota,+ Sibreyim, nke dị n’agbata ókè ala Damaskọs+ na ókè ala Hemat; Heza-hatikọn, nke dị n’ókè nke ala Haụran.+
17 Ókè nke ala ahụ nke malitere n’oké osimiri ga-abụ Heza-inọn,+ ya bụ, ókè nke ala Damaskọs na ebe ugwu—n’ebe ugwu, nakwa ókè nke ala Hemat.+ Nke a bụ akụkụ ya nke ebe ugwu.
18 “Akụkụ ya nke ebe ọwụwa anyanwụ malitere n’agbata Haụran+ na Damaskọs+ nakwa n’agbata Gilied+ na ala Izrel; unu ga-atụ̀ Jọdan,+ malite n’ókè ya ruo n’oké osimiri nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ. Nke a bụ akụkụ ya nke ebe ọwụwa anyanwụ.
19 “Akụkụ ya nke ndịda dị n’ebe ndịda, malite na Tema+ ruo ná mmiri Meribat-kedesh,+ nke bụ́ iyi ndagwurugwu,+ ruokwa n’Osimiri Ukwu. Nke a bụ akụkụ ya nke ndịda, n’ebe chere ihu na Negeb.
20 “Akụkụ ya nke ebe ọdịda anyanwụ bụ Osimiri Ukwu, malite n’ókè ya ruo n’ebe e si abanye Hemat.+ Nke a bụ akụkụ ya nke ebe ọdịda anyanwụ.”
21 “Keenụ ala a n’etiti onwe unu, n’ebo iri na abụọ nke Izrel.
22 Unu ga-ekekwa ya n’etiti onwe unu ka ọ bụrụ ihe nketa unu.+ Unu ga-ekenyekwa ndị mbịarambịa bi dị ka ọbịa n’etiti unu,+ bụ́ ndị mụrụ ụmụ n’etiti unu. Ha ga-aghọkwara unu ụmụ amaala n’etiti ụmụ Izrel. Ha ga-eso unu nweta ihe nketa n’etiti ebo niile nke Izrel site n’ife nza.+
23 Ọ ga-erukwa na ebo ọ bụla nke onye mbịarambịa bi n’ime ya dị ka ọbịa, ebe ahụ ka unu ga-enye ya ihe nketa ya,” ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D26%26Chapter%3D47%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl